Waa Tuma Gabadha Heesaaga Ah Ee Bilyaneerka Noqotay? – somalilandtoday.com
Rihanna ayaa haatan si rasmi ah u noqotay bilyaneer iyo weliba haweenayda ugu qanisan dumarka heesa ee caalamka, sida lagu sheegay wargeyska Forbes.
Xiddigtan heesta ayaa waxa ay haysataa hanti gaaraysa $1.7 bilyan (£1.2 bilyan), iyadoo la qiyaasayo in $1.4 bilyan ay ku fadhiso shirkadeeda sameesa alaabaha ay haweenka isku qurxiyaan ee Fenty Beauty.
Dhaqaalaheeda kale waxa uu inta badan ka yimid shirkaddeeda dharka hoosta laga xirto, Savage x Fenty, taas oo lagu qiyaasay $270 milyan, iyo lacagaha ay ka hesho heesaha iyo jilliinka.
Waxa ay kaalinta labaad ugu jirtaa Oprah Winfrey oo ah haweenayda ugu qanisan dumarka caalamka ee madadaalada sameeya.
Rihanna – taas oo magaceeda rasmiga ah uu yahay Robyn Fenty – ayaa sanadkii 2017 waxa ay bilowday shirkadda Fenty Beauty iyadoo shirko la noqotay shirkadda iibisa alaabaha qaaliga ah ee LVMH.
Waqtigaas, waxa ay sheegtay in ujeedkeedu uu yahay inay “haweenka oo dhan” ay gaarto markaas oo ay bilowday 40 nooc oo kala duwan oo walxaha la isku qurxiyo ah, arrintaas waqtigaas aanan nooceeda oo kale hore loo arag. Waxa ay arrintaasi horseedday waxa loo bixiyay “Fenty Effect” xilligaas oo shirkadaha kale ee farsameeya waxyaabaha la isku qurxiyo ay iyaguna wax ka badaleen wax soo saarkoodu.
Ganacsigaas sanadkii ugu horreeyay waxaa laga soo xareeyay dakhli ka badan $550 milyan, LVMH ayaa sidaasi sheegtay.
Sikataba xaalku ha ahaadee dhammaan ganacsiyada Rihanna ma aanay wada bulaalin.
Bilowgii sanadkan, 33-jirkan ayaa waxa ay LVMH ka ogolaatay in la hakiyo faashiyanka Fenty loogu magacdaray laba sanadood kaddib markii la soo saaray.
Heesaaga u dhalatay dalka Barbadia ayaa waxa ay gadday in ka badan 250 milyan oo cajaladood oo ay duubtay, hasayeeshee tan iyo 2016-kii ma aanay sii dayn albam ay istuudiyow ku duubtay.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaa dhawaantan la arkay iyadoo muuqaal la duubaysa saaxiibkeed heesaaga ah ASAP Rocky.
Rihanna waxay ka mid tahay fanaaniinta heesohooda aadka loo iibsado, oo waxa laga iibiisay ilaa 250 milyan. Waxa ay sidoo kale ku caan baxday jilidda filimaanta iyo naqshadeynta dharka.
Waxa ay ku dhalatay magaalada Saint Michael ee dalka Barbados, waxa ayna ku kortay magaala madaxda dalka ee Bridgetown
Waxa ay halkaasi ku qaadatay waqtiyadeedii da’yarta markii uu soo saare ameerikaan ah ogaanayay hay’badeeda heesaanimada, kaas oo ka caawiyay in ay ku soo biirto shaxda Mareykanka.
Sanadkii hore ayay ahayd markii waddo ay ku nooleed loo bixiyay Rihanna oo lagu sharfay.
Waxay ku guuleeystay in ay noqoto qof caan ah oo ganacsiga ku xeeldheer, sidaas darteed waxay awood u leedahay in ay door weyn ka cayaarto isbedelka waddanka Barbados.
fanaanaddan oo macagaceedoo dhamaystiran la yirahdo Robyn Rihanna Fenty, ayaa sannadkii 2018-kii loo magacaabay jaga sare oo safiirnimo ah. Shaqadeeda waxaa ka mid ah, hormarinta wax barashada, dalxiiska iyo maalgashiga